Zvekugara Kugovana Statistics | Martech Zone
Svondo, October 16, 2011 Chitatu, October 26, 2011 Douglas Karr
Ini ndangonyora nezvekushandisa kugovana munharaunda pamapeji ako ekumhara, saka nguva yeiyi infographic haigone kuve nani. Iwo manhamba ari kushamisika nemagariro ari kukanganisa chiratidzo chako muchiratidzo online. Kusiyana nemamwe masvikiro, isu tinogara tichiona kuti kugovana pasocial mukana wakazonaka wekuparadzira iro izwi kuburikidza neakakodzera masocial network. Kugovana munharaunda inosanganisa zvakanakira izwi remuromo kuwedzera kune endorsement.
Wedzerai yakapa iyi infographic, ichisunungura iwo manhamba pane anopfuura mamirioni gumi saiti anosvika 10 mabhiriyoni vanhu pamusoro pemakore mashanu! Chinhu chakakosha kutora kwandiri inguva yekugovana nguva ye1.2: 5 AM. Sezvo iwe uchishanda kuburikidza neyako nzira yekugovana, iwe ungangoda kufunga nezve nguva yenguva dzevateereri iwe wauri kuda kusvika!